China SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test mpanamboatra sy mpamatsy | Liming Bio
TheStrongStep®SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test dia famandrihana immunochromatographic haingana ho an'ny fitiliana ny antigen COVID-19 mankany amin'ny virus SARS-CoV-2 ao anaty vatan'ny Throat / Nasopharyngeal olombelona. Ny assay dia ampiasaina amin'ny fanampiana asan amin'ny famaritana ny COVID-19.
Ireo novakin'ny coronavirus dia an'ny. Genus. COVID-19 dia aretina miteraka areti-mifindra mahery vaika. Mora tohina ny olona amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ireo marary voan'ny virus coronavirus no loharanon'ny aretina; ny olona voan'ny asymptomatika dia mety ho loharanom-aretina koa. Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny epidemiolojika ankehitriny, ny vanim-potoana fampidirana zaza dia 1 ka hatramin'ny 14 andro, ny ankamaroany dia 3 ka hatramin'ny 7 andro. Ny tena fisehoana dia ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Ny fitohanana eo amin'ny orona, ny orona, ny tenda, ny myalgia ary ny fivalanana dia hita amina tranga vitsivitsy.
The StrongStep®Ny SARS-CoV-2 Antigen Test dia mampiasa fitaovana fitsapana mikraoba manaraka ny chromatographic amin'ny endrika cassette. Ny antibody mampifangaro latabatra (Latex-Ab) mifandraika amin'ny SARS- CoV-2 dia maina-immobilized amin'ny faran'ny tadin'ny membrane nitrocellulose. Ny antibodies SARS-CoV-2 dia mifamatotra ao amin'ny Zone Test (T) ary ny Biotin-BSA dia mifamatotra ao amin'ny Zone Control (C). Rehefa ampiana ny santionany dia mifindra amin'ny alàlan'ny fanaparitahana capillary rehydrating ny latex conjugate izy. Raha misy amin'ny santionany, ny antigère SARS-CoV- 2 dia hamatotra ireo antikôniôma kely mifangaro kely mifangaro. Ireo poti-javatra ireo dia hitohy hifindra monina mandra-pahatongan'ny faritra fitsapana (T) izay azon'ireo antibodies SARS-CoV-2 miteraka tsipika mena hita. Raha tsy misy antigène anti-SARS-CoV-2 ao anaty santionany dia tsy misy tsipika mena miforona ao amin'ny faritra test (T). Ny conjugate streptavidin dia hitohy hifindra monina mandra-pahatongany ho voasambotra ao amin'ny Zone Control (C) amin'ny alàlan'ny Biotin-BSA miangona amin'ny tsipika iray, izay manondro ny maha-marina ny fitsapana.
Fitaovana fanandramana 20 natokana ho an'ny tsirairay
Ny fitaovana tsirairay dia misy tadiny misy conjugate miloko sy reagents reaktika efa niparitaka mialoha tamin'ny fiovana mifanaraka amin'izany.
Tavoahangy buffer 2 fanesorana
0,1 M Masira masira phosphate (P8S) ary az0 sodium azafady.0.02%.
Ho an'ny fampiasana fanomanana santionany.
Toerana mitazona tavoahangy sy fantsom-boaloboka.
Ampidiro fonosana 1
Ho an'ny torolàlana momba ny fandidiana.
IREO MATERIELY Ilaina FA TSY VOAFIDY
fameram-potoana Ho an'ny fampiasana ara-potoana.
Tondra-tenda / nasofaryngeal Ho an'ny fanangonana santionany
Ity kit ity dia ho an'ny fampiasana diagnostika IN VITRO ihany.
Ity kit ity dia ho an'ny fampiasana matihanina amin'ny fitsaboana ihany.
Vakio tsara ireo torolalana alohan'ny hanaovana ilay fitsapana.
Ity vokatra ity dia tsy misy akora nalaina avy amin'olombelona.
Aza mampiasa atiny kit intsony aorian'ny daty lany daty.
Araraoty fa mety ho areti-mifindra ny santionany rehetra.
Araho ny fomba fanao amin'ny laboratoara sy ny torolàlana momba ny biosafety amin'ny fikirakirana sy fanariana ireo fitaovana mety infective. Rehefa vita ny fizotran'ny fitsapana dia esory ny santionany aorian'ny famindrana azy hatrany amin'ny 121 ℃ mandritra ny 20 minitra farafahakeliny. Raha tsy izany, dia azo tsaboina amin'ny 0,5% Sodium Hypochlorite adiny efatra alohan'ny fanariana azy ireo.
Aza pipette reagent amin'ny vava ary tsy mifoka na mihinana rehefa manao fitsapana.
Manaova fonon-tànana mandritra ny fomba rehetra.
FITONDRANA SY FAHATONDRANA
Ireo paosy voaisy tombo-kase ao amin'ny kitapo fanandramana dia azo tehirizina eo anelanelan'ny 2-30 ℃ mandritra ny androm-piainan'ny talantalana araka ny voalaza eo amin'ny paosy.
FANAMPOANA SY FITONDRANA MANOKANA
Sampona Swab Nasopharyngeal: Zava-dehibe ny fahazoana tsiambaratelo faran'izay betsaka. Noho izany, mba hanangonana santionany Swab Nasofaryngeal, ampidiro tsara ilay Swab tsy misy steril ao am-bavorony izay manome ny tsiambaratelo indrindra eo ambanin'ny fanaraha-maso. Tazomy eo akaikin'ny gorodona septum amin'ny orona ny Swab raha atosika moramora ilay Swab ao anaty nasofary aoriana. Ahodino imbetsaka ny Swab. Tora-tenda: ampidirano lela na sotro ny lela. Rehefa manosotra ny tendanao dia tandremo mba tsy hikasika ny lela, ny sisiny na ny tampon'ny vava amin'ilay Swab. Atsofohy ao ambadiky ny tenda ny Swab, ny amandony ary amin'ny faritra hafa izay misy mena, mamontsina na manaikitra Mampiasà savony voasesika rayon mba hanangonana modely. Aza mampiasa alginate kalsioma, savony vita amin'ny landihazo na savony hazo.
Soso-kevitra ny amin'ny fikarakarana ny santionany swab raha vao vita aorian'ny fanangonana. Ny savony dia azo atao ao anaty fantsom-plastika madio na maina na tanana hatramin'ny 72 ora amin'ny mari-pana (15 ° C ka hatramin'ny 30 ° C), na amin'ny vata fampangatsiahana (2 ° C ka hatramin'ny 8 ° C) alohan'ny fikarakarana.
Mitondrà andrana, santionany, buffer ary / na fifehezana amin'ny hafanan'ny efitrano (15-30 ° C) alohan'ny hampiasana azy.
1. Mametraha fantsom-pitrandrahana madio amin'ny faritra voatondro ao amin'ny toeram-piasana. Manampia 10 nilatsaka Buffer Extraction ao amin'ny fantsona fitrandrahana.
2. Atsofohy ao anaty fantsona ilay fako. Afangaroy mafy ny vahaolana amin'ny alàlan'ny fihodinana tanteraka ny herin'ny swab amin'ny sisin'ilay fantsona farafahakeliny folo (mandritra ny lentika) .Ny valiny tsara indrindra dia azo rehefa afangaro amin'ny vahaolana ilay santionany. Avelao hilomano ao anaty Exterion Buffer mandritra ny iray minitra ny savony alohan'ny dingana manaraka.
3. Potseroina araka izay tratra ny savony avy amin'ny savony amin'ny alàlan'ny fametahana ny sisin'ny fantsom-pitrandrahana azo ovaina rehefa esorina ilay savony. Farafaharatsiny 1/2 ny vahaolana buffer santionany dia tsy maintsy mijanona ao anaty fantsona mba hisian'ny fifindra-monina capillary sahaza. Ataovy eo amin'ilay fantsona nesorina ilay satroka. Atsipazo ao anaty fitoeram-pako biohazardous mety.
4. Ireo santionany nalaina dia afaka mitazona amin'ny hafanan'ny efitrano mandritra ny 60 minitra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny valin'ny fitsapana.
5. Esory ny fitsapana amin'ny paosiny voaisy tombo-kase, ary apetraho amin'ny toerana madio sy madio izy. Asio marika amin'ny famantarana ny marary na fanaraha-maso ny fitaovana. Mba hahazoana valiny tsara indrindra dia tokony hatao ao anatin'ny adiny iray ny fitsapana.
6. Ampiana 3 latsaka (eo ho eo amin'ny 100 µL) ny santionany nalaina avy tao amin'ny Tube Extraction ho any amin'ny santionany tsara tamin'ny kasety fanandramana. Aza sorohana tsara ny velam-baravaran'ny rivotra ao anaty santionany (S), ary aza mandatsaka vahaolana ao am-baravarankely fandinihana. Rehefa manomboka miasa ny fitsapana, dia ho hitanao ny loko mihetsika manerana ny membrane.
7. Andraso hiseho ny tarika miloko. Ny valiny dia tokony hovakiana amin'ny 15 minitra.
Aza adika ny valiny aorian'ny 20 minitra. Ario ireo fantsom-pitsapana nampiasaina sy ireo kasety fisedrana ao anaty kaontenera fako biohazardous mety.
INTERPRETATION ny valiny
VOKA POSITIFA Tarika miloko roa miseho ao anatin'ny 15 minitra. Tarika miloko iray no miseho ao amin'ny Zone Control (C) ary tarika miloko iray hafa kosa no hita ao amin'ny Zone Test (T). Ny valin'ny fitsapana dia tsara sy mitombina. Tsy maninona na oviana na oviana ny tarika miloko miseho ao amin'ny Zone Zone (T), ny valin'ny fitsapana dia tokony ho raisina ho vokatra tsara.
VOKATRA NEGATIF Tarika miloko iray no hita ao amin'ny Zone Control (C) ao anatin'ny 15 minitra. Tsy misy tarika miloko miseho ao amin'ny faritra fanandramana (T). Ny valin'ny fitsapana dia ratsy sy mitombina.
Valiny INVALIDA Tsy misy tarika miloko miseho ao amin'ny Zone Control (C) ao anatin'ny 15 minitra. Tsy marina ny valin'ny fitsapana. Avereno amina fitaovana fitsapana vaovao ny fitsapana.
FAMERENANA NY FITSAPANA
1. Ny fitsapana dia ny fahitana qualitative anti-SARS-CoV-2 antigens ao amin'ny olombelona Throat / Nasopharyngeal swab sample and dose tsy manondro ny habetsan'ny antigens.
2. Ny fitsapana dia ho an'ny diagnostika in vitro ihany.
3. Toy ny tranga fitsapana diagnostika rehetra, ny famaritana klinika azo antoka dia tsy tokony hiorina amin'ny valin'ny fitsapana tokana fa tokony hatao kosa aorian'ny nanombanana ny fikarohana rehetra momba ny klinika, indrindra ny fitsapana ny fitsapana PCS SARS-CoV-2. 4. Ny fahatsapana ho an'ny fitsapana RT-PCR amin'ny famaritana ny COVID-19 dia 30% -80% ihany noho ny kalitaon'ny santionany na ny fotoana ateraky ny aretina amin'ny dingana famerenana amin'ny laoniny, sns .. Ny fahatsapana ny fahatsapan'ny sela an'ny SS-CoV-2 Antigen Rapid Test ambany noho ny Metodolojia.
Fanohanana ara-teknika: poct_tech@limingbio.com
Trakitra fitsapana haingana an'ny Antigen (20200713)
Kitapo antigen COVID-19
Previous: Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Kit PCR Multiplex tena izy
Manaraka: Fitaovana Dual Biosafety System ho an'ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
Fitsapana haingana ho an'ny antigen Sars-Cov-2
Fitsapana haingana an'ny Sars-Cov-2 Antigen
Fitaovana rafitra biosafety roa ho an'ny SARS-CoV-2 Ant ...
Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen,